यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् महिलाको अनुहारमा दाह्री जुँगा नआउने कारणहरु
डिसेम्बर 27, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments दाह्री जुँगा, महिला
महिलाको दाह्री जुँगा किन आउदैन ? केटीहरुहरुलाई दारी नपालेका भन्दा दारी पालेका केटा बढी मनपर्छ । त्यसो त आजकलका केटाहरुको पनि दारी पाल्ने फेसन नै भइसक्यो । केटाहरुले आजकल झप्प पारेर दार्ही पाल्ने चलन आएको छ । दार्ही पाल्दा खेरि आफ्नो छुट्टै आकर्षण रहने प्राय: केटाहरुमा रहदै आएको छ । केटीहरुहरुलाई प्रभावित पार्नका लागि केटाहरु हरेक प्रकारका कोशिसहरु गर्ने गर्छन् । हामीले देखिआएको तथ्य हो, पुरूषहरूको दाह्री जुगाँ आएको हुन्छ यद्यपी महिलाहरूको हुदैन । तर पनि अपवादमा केही केही महिलाहरूको पनि दाह्री जुँगा आएको देखिन्छ । यसरी पुरूषमा दाह्री जुँगा आउने तर महिलामा नआउने कसरी हुन्छ त ?
← डिप्रेसनको सजिलो उपचार
च्याउ र मानव स्वास्थ्य →
नोभेम्बर 13, 2016 नोभेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 5
2 thoughts on “महिलाको अनुहारमा दाह्री जुँगा किन आउदैन ?”
Pingback:यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् महिलाको शरीरमा अनावश्यक रौँ आउने कारणहरु